LEGO တိုင်းသည် ၂၀၂၁ - စက်တင်ဘာလ update အတွက်အနားယူရန်သတ်မှတ်ထားသည်
15 / 09 / 2021 24 / 09 / 2021 Jack Yates 1493 Views စာ 1 မှတ်ချက် Architecture, art, Batman, Black ကသောကြာနေ့, Black ကသောကြာနေ့ 2021, BrickHeadz, City, ဖန်ဆင်းရှင်, Creator 3-in-1, Creator Expert, Dc, DC ကသူရဲကောင်းများ, Disney, DOTS, Friends, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Ideas, Jurassic World, Lego, Lego Architecture, LEGO Art, Lego Batman, Lego BrickHeadz, Lego CIty, Lego ဖန်တီးသူ, Lego Creator 3-in-1, Lego Creator Expert, Lego DC က, Lego, DC စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego Disney, Lego DOTS, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Friends, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Ideas, Lego Jurassic World, Lego Marvel, Lego Monkie Kid, Lego Ninjago, Lego Speed Champions, Lego Star Wars, Lego Stranger Things, Lego စူပါမာရီယို, Lego Technic, Lego Vidiyo, LEGO.com, Marvel, Monkie Kid, နင်ဂျာဂို, မကြာခင်အနားယူတော့မည်, Speed Champions, Star Wars, Stranger Things, စူပါမာရီယို, နည်းပညာ, အဆိုပါ LEGO Group, ဗီဒီယို, VIP တနင်္ဂနွေ, ၂၀၂၁ VIP ပိတ်ရက်
အပြောင်းအလဲအားလုံး Lego Monkie Kid, နည်းပညာ နှင့် VIDIYO ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်း၌အငြိမ်းစားယူသောအဖွဲ့တိုင်း၏ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးသတင်း၌
များနေပြီ နည်းပညာ နှင့် VIDIYO ကျွန်ုပ်တို့၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်သည်အနည်းဆုံး ၂၀၂၂ ခုနှစ်သို့ပြန်လည်တွန်းပို့ခံခဲ့ရသည် နောက်ဆုံး update ကို သြဂုတ်လတွင်မကြာသေးမီကထုတ်ဝေခဲ့သည် Monkie Kid အနည်းဆုံးတော့ပုံစံသစ်အတိုင်းနှစ်သစ်ကိုရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး Brick Fanatics'ရင်းမြစ်များ။
ထိုအကြောင်းအရာများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်အောက်သို့ဆွဲချပြီးစာရင်းအပြည့်အစုံကိုစစ်ဆေးပါ Lego ဤနှစ်ကုန်တွင်စင်ပေါ်မှထွက်ခွာရန်သတ်မှတ်ချက်များ ပြီးခဲ့သည့်လတစ်လျှောက်တွင်အပြောင်းအလဲများသည်ပြသသည့်အနေနှင့်ဤရက်စွဲများကိုသေချာစွာသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းလာမည့်လအနည်းငယ်အတွင်းသင်၏ ၀ ယ်ယူမှုအစီအစဉ်များအတွက်အသုံးဝင်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဤအငြိမ်းစားယူနစ်များထဲမှနိုဝင်ဘာလအထိစင်ပေါ်တွင်ဆက်လက်ရှင်သန်နေပါကအနည်းဆုံး၎င်းတို့ထဲမှအနည်းဆုံးအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ Lego VIP တနင်္ဂနွေ, Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ – ဒါပေမယ့် အဲဒီဈေးဝယ်ပွဲတွေ မတိုင်ခင် ရောင်းမကုန်ဘူးလို့ အာမခံချက် မရှိပါဘူး၊ ဒါကြောင့် အငြိမ်းစားယူဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေတယ်ဆိုရင် အဲဒါကို ဘဏ်မှာ မထားပါနဲ့။
Lego Star Wars ယခုနှစ်တွင်အချို့သောအစုံများသို့လက်ပြနှုတ်ဆက်ပါလိမ့်မည် 75275 A- တောင်ပံ StarfighterUltimate မှစုဆောင်းရမည့် Series Model တစ်ခုဖြစ်သည် Lego Group ၏ catalog သည်အခြား UCS အစုံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စောသည်။
စာရင်းထဲကတစ်နေရာကနှစ်ယောက် Lego Star Wars Brick Sketches ပုံမှန်အားဖြင့်အများအားဖြင့်ကြာရှည်ဆုံးစင်ပေါ် ၁၈ လအကြာတွင်ယခုနှစ်တွင်အငြိမ်းစားယူလိမ့်မည်။ ဘယ်သူမဆိုလာယူချင်သည် ၇၅၁၈၇ BB-40431 or 40391 ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့် Stormtrooper အချိန်မကုန်မီမြန်မြန်လုပ်စေချင်သည်။
75249 ခုခံ Y-Wing Starfighter
75251: Dartဇ Vader's ရဲတိုက်
75254 ကို AT-ST Raider ကို
75267 Mandalorian တိုက်ပွဲ Pack ကို
75270 Obi-Wan ရဲ့တဲ
75271 လုကာ Skywalker ရဲ့ Landspeeder
75273 ဖိုး Dameron ရဲ့ X- တောင်ပံတိုက်လေယာဉ်
75274 TIE တိုက်လေယာဉ်လေယာဉ်မှူးသံခမောက်လုံး
75275 A- တောင်ပံ Starfighter
75281 Anakin ရဲ့ Jedi ကြားဖြတ်
Ren သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသင်္ဘော၏ 75284 Knights
75286 အထွေထွေ Grievous ရဲ့ Starfighter
75291 မရဏစတားနောက်ဆုံး Duel
40391 ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့် Stormtrooper
31200 Star Wars သူမ
အနားယူဖို့နဲ့ပတ်သက်လာရင် Lego Ideas အစုံ၊ ပြန်လည်ထုတ်ဝေသည် 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော ဒီနှစ်ကုန်မှာဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်ပေါ်တွေကျန်ခဲ့လိမ့်မယ် Lego အုပ်စုသည်ဤပုံစံကိုတတိယအကြိမ်ထုတ်ရန်အစီအစဉ်ရှိပြီး၎င်းသည်သင်၏စုဆောင်းမှုထဲသို့ထည့်ရန်နောက်ဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။
မဟုတ်ရင်နာမည်ကြီးတယ် 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ စာရင်းတွင်ဒုတိယမြောက်သင်္ဘောပုံစံအဖြစ်နှစ်ကုန်တွင်အငြိမ်းစားယူသည်။ Black Seas Barracuda ရွက်လွှင့်ရန်အခွင့်အလမ်းမရမီ Captain Redbeard နှင့်သူ၏အဖွဲ့သားများသည်နောက်ဆုံးပုံစံငယ်များကိုရရန်မျှော်လင့်သည်။
အတော်လေးအစုံပါပါတယ် Lego Marvel နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအငြိမ်းစားယူကြသည်၊ mech-based မော်ဒယ်များ၏နှစ်စဉ်စုဆောင်းခြင်းအပါအ ၀ င်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှားပါး minifigure သို့မဟုတ်နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
minifigure-scale မော်ဒယ်များ၏အပြင်ဘက်တွင်ရွေးချယ်မှုသည် ပို၍ ထူးခြားသည် Marvel ပူဇော်သက္ကာများသည်လည်းမကြာမီအနားယူတော့မည်။ ဒီထဲမှာပါဝင်ပါတယ် Lego Art 31199 Marvel Iron Man စတူဒီယိုများ ပင် 76165 သံက Man သံခမောက်လုံးမရ။ စုဆောင်းသူများ Lego အဖွဲ့၏ ဦး တည်ချက်ပေါင်းစုံပါ ၀ င်သော Helmet စုဆောင်းခြင်းသည်နောက်ဆုံးတည်ဆောက်မှုကိုအထူးစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။
Thanos vs. 76170 သံက Man
76140 သံက Man Mech
76151 Venomosaurus ကင်းထိုး
76152 Loki ၏သေစားသေစေသောအမျက်ဒေါသ
၇၆၁၅၃ Avengers Helicarrier
76162 အနက်ရောင်မုဆိုးမရဲ့ရဟတ်ယာဉ် Chase
၇၆၁၆၃ Venom Crawler
AIM ကိုယ်စားလှယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 76164 Iron Man Hulkbuster
76165 သံက Man သံခမောက်လုံး
76166 Avengers မျှော်စင်စစ်တိုက်
76167 သံက Man လက်နက်တိုက်
31199 Marvel Iron Man စတူဒီယိုများ
76125 သံက Man သံမဏိခန်းမ
အော်ဒါမှာဖို့တော်တော်လေးအချိန်နည်းပါတယ် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အပြင်အဆင်၏အတော်လေးမကြာသေးမီက minifigure accessory pack များထဲမှတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်၊ ၇၆၃၈၆ Hogwartကျောင်းသားများဆက်စပ်ပစ္စည်းအစုံကောင်းသောအရာသည်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်။
ဘယ်မှာပါလိမ့် ၇၆၃၈၆ Hogwartကျောင်းသားများဆက်စပ်ပစ္စည်းအစုံ သဘောကျလား။ အခင်းအကျင်းမှအခြားအငြိမ်းစားမော်ဒယ်များသာလျှင်တစ် ဦး အဖြစ်သေချာစွာသိလိမ့်မည် Lego အုပ်စု၏နောက်ဆုံး ၂၀၁၈ တည်ဆောက်မှုသည်နှစ်ကုန်တွင်အငြိမ်းစားယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၂၁ မတိုင်မီစင်ပေါ်မှထွက်ခွာသောအတွဲအစုံစာရင်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
75947 Hagrid's တဲ: Buckbeak ရဲ့ကယ်ဆယ်ရေး
၇၆၃၈၆ Hogwarts လိုအပ်ချက်အခန်း
75967 တားမြစ်ထားသောသစ်တော: Umbridge ၏ကြုံတွေ့ရ
သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောငွေပမာဏအဖြစ်နည်းပညာရယူရန်အချိန်တန်ပါပြီ Lego နည်းပညာ အစုံများသည်လောလောဆယ်နှစ်ကုန်တွင်အငြိမ်းစားယူရလိမ့်မည်၊ အထူးသဖြင့်သေးငယ်ရှုပ်ထွေးသောဖန်တီးမှုများများစွာအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည် နည်းပညာ အတွက်လူသိများလာသည်။ အကြိုက်များသည် 42102 Mini ကို CLAAS XERION နှင့် 42103 Dragster အငြိမ်းစားယူရန်အသင့်ဖြစ်ပြီ၊ ထို့ကြောင့်သင်စျေးသက်သက်သာသာနှင့်ခက်ခဲသောတည်ဆောက်မှုအတွက်ယားယံနေလျှင်လက်မလွှတ်ပါနှင့်။
သို့သော်ငြားလည်း, 42107 Ducati Panigale V4 R ကို နှင့် 42116 Skid စတီယာရင် Loader ကို နှစ် ဦး စလုံးသည်အငြိမ်းစားယူရန်စီစဉ်ထားသောကြောင့်ယခု ၂၀၂၂ တွင်ရှင်သန်လိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့နှစ်ခုကိုရွေးရန်အချိန်အနည်းငယ်ပိုရနိုင်သည်။
42090 ထွက်ပြေးဖို့ Truck ကား
42099 4X4 X-treme Off-Roader ဖြစ်သည်
42100 Liebherr R ကို 9800 တူးဖော်
42102 Mini ကို CLAAS XERION
42106 တန့်ပြရန် Truck & စက်ဘီး
42107 Ducati Panigale V4 R ကို
42109 App-Controlled ထိပ်တန်း Gear ပြိုင်ပွဲကား
လူကြီးများအတွက် LEGOCreator Expert
Lego အငြိမ်းစားယူခြင်းသည်အခြားဆင်ခြေတစ်ခုနှင့်နည်းနည်းပိုချောလာခဲ့သည် 10267 Gingerbread အိမ်, အ Lego ဆောင်းရာသီစုဆောင်းမှုတွင်အဖွဲ့၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဝင်ရောက်မှု
အစုံကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးပြီလား။ ဂက်ဂျက်ဖြည့်ခြင်းအပါအ ၀ င်အခြားကုန်ခြောက်ကြီးများသည်နှစ်ကုန်တွင်အငြိမ်းစားယူသောကြောင့်သင်၏ဘဏ်အကောင့်သည်မလုံခြုံသေးပါ။ 10262 ဂျိမ်းစ်ဘွန်း Aston M ကartDB5 ၌တည်၏ နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ၁၀၂၆၁ Roller Coaster.
10258 London ဘတ်စ်ကား
တက်သစ်စ (သို့) အခြားဗိသုကာပညာရှင်များသည်ထိုငါးခုကိုကြားရန်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည် Lego အဖွဲ့၏တည်ဆောက်မှုအခြေပြု microscale အစုံများကိုဒီဇင်ဘာနောက်ပိုင်းတွင်ရရှိနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
၎င်းတို့တွင် Skylines ခေါင်းစဉ်ငယ်နှစ်ခုပါ ၀ င်သည် 21043 San Francisco က နှင့် 21052 ဒူဘိုင်း ကြီးမားသည်နှင့်အမျှ 21046 အင်ပါယာပြည်နယ်အဆောက်အ ဦး - မင်းသွားကြည့်ဖို့ယားယံရင်မကောင်းတဲ့လက်ဆောင်မဟုတ်ဘူး New York အထင်ကရ LEGO စတိုး ဒါပေမယ့်ဒီအချိန်မှာမလုပ်နိုင်သေးဘူး။
As Ninjago နောက်ထပ်တစ်နှစ်တာအတွက်အမြဲလိုလိုချဲ့ထွင်ထားတဲ့ဇာတ်ကြောင်းကိုဆက်ပြီးပြင်ဆင်နေတယ်၊ ​​အဲဒါကဒီနှစ်အကုန်မှာအနားယူဖို့စီစဉ်ထားတဲ့တောင်တန်းအပိုင်းရဲ့မာစတာတွေအများကြီးနဲ့နှုတ်ဆက်ဖို့အချိန်တန်ပြီ။ ဤ board-game-inspired subtheme တွင် skeletal ကဲ့သို့ထူးခြားသောပုံစံအချို့ပါ ၀ င်သည် 71721 ဦး ခေါင်းခွံမျှောဆရာရဲ့နဂါး.
Minifigure စုဆောင်းသူများသည်လည်းသတိပြုရန်လိုပေမည် 40374 ရွှေ Zane MF Acc ။ သတ်မှတ်မည် အထူးသီးသန့် Golden Zane သည်ကြာကြာမရရှိနိုင်ပါ။
40374 ရွှေ Zane MF Acc ။ သတ်မှတ်မည်
71701 Kai ၏မီးသတ်နဂါး
71704 Kai တိုက်လေယာဉ်
71705 Destiny ရဲ့ကျေးဇူး
71709 ဂျေးနှင့်လွိုက်ရဲ့ Velocity ပြိုင်ကားသမား
71719 Zane ရဲ့ Mino သတ္တဝါ
71720 မီးသတ်ကျောက်ခေတ် Mech
71721 ဦး ခေါင်းခွံမျှောဆရာရဲ့နဂါး
71722 ဦး ခေါင်းခွံမျှောဆရာ
Lego Batman/DC စူပါသူရဲကောင်းများ
သန့်ရှင်းသောအနားယူမှု၊ Batman! ကိုး Lego DC ကာတွန်း Crusader အပါအ ၀ င်ရုပ်ပြများနှင့်အခြားသူရဲကောင်းများကိုဂုဏ်ပြုသောအဖွဲ့များသည်မကြာမီစင်ပေါ်မှထွက်ခွာတော့မည်။
ဒီနှစ်ခုပါဝင်ပါတယ် Batman Brick Sketches, 40386 Batman နှင့် 40428 အဆိုပါ Jokerအပြင်၊ ဧရာမ ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobileမရ။ ကြီးကြီးမားမားတစ်ခုလုံးကိုစုဆောင်းရန်မျှော်လင့်သူမည်သူမဆို Lego Batmobiles တွေလိုမျိုးအရင်လိုပေါ့ 76240 Batmobile Tumblerမြန်မြန်လုပ်ရမယ် စတော့ရှယ်ယာများသည်အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေသောကြောင့် 1989 မူကွဲအတွက်
40428 အဆိုပါ Joker
76157 Weter Woman vs Cheetah
76158 Batboat အဆိုပါ Penguins လိုက်စား!
76159 Joker ရဲ့ Trike Chase
76160 Mobile Bat အခြေစိုက်စခန်း
Lego စူပါမာရီယို ဒီဇင်ဘာအကုန်တွင် Mushroom Kingdom အဖွဲ့ဝင်အနည်းငယ်ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးစေသောအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောဇာတ်ကောင်များနှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာအစုံများသည်အငြိမ်းစားယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
Bowser ကိုယ်တိုင်ဝင်သည် 71369 Bowser ၏ရဲတိုက် Boss တိုက်ပွဲတိုးချဲ့သတ်မှတ်မည် Toad နှင့် Toadette အတွင်းသို့ 71368 ဘားစက်ရဲ့ရတနာ Hunt တိုးချဲ့သတ်မှတ်မည်ဤ ၁၇ ခုအတွက်အချိန်တိုသည် Lego အစုံ။
71363 ကန္တာရ Pokey တိုးချဲ့သတ်မှတ်မည်
71365 Piranha Plant Power Slide တိုးချဲ့ရန်သတ်မှတ်မည်
71367 Mario's House & Yoshi ချဲ့စက်များ
71368 ဘားစက်ရဲ့ရတနာ Hunt တိုးချဲ့သတ်မှတ်မည်
71369 Bowser ၏ရဲတိုက် Boss တိုက်ပွဲတိုးချဲ့သတ်မှတ်မည်
71370 မီးသတ် Mario Power-Up ကို Pack ကို
71372 Cat Mario ပါဝါ Up-Pack ကို
71376 Thwomp ချဲ့ချဲ့သတ်မှတ်မည်
71377 King Boo နှင့် Haunted Yard တိုးချဲ့ခြင်းအစုံ
ပေမဲ့ Lego ဖန်ဆင်းရှင်သည် ပြန်လည်ရှင်သန်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ retro တစ်ခု Lego ၂၀၂၂ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်ဆောင်ပုဒ်၊ ဒီဇိုင်းများသည်အတိတ်၌ဆောင်ကြဉ်းခဲ့သောဖန်တီးမှုလက်ရာများကိုမမေ့ပါနှင့်၊ ဤရှစ်မျိုးကဲ့သို့မကြာမီစင်ပေါ်မှထွက်ခွာတော့မည်။
အငြိမ်းစားယူသောဖန်ဆင်းရှင်ပုံစံများ၏အကွာအဝေးများထဲတွင်အထူးခြားဆုံးဖြစ်သည် 31104 နဂါးဘာဂါ Truck ကားမတူညီတဲ့တည်ဆောက်မှုသုံးခုအတွက် theme features တွေတိုင်းမှာ options တွေရှိပါတယ်။
31093 Riverside မှ Houseboat
31097 Townhouse အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုင်နှင့်ကဖေး
31104 နဂါးဘာဂါ Truck ကား
31105 Townhouse ကစားစရာဆိုင်
Speed Champions ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်မော်တော်ယာဉ်အပြင်အဆင်မှထွက်ခွာရန်အတော်လေးသေးငယ်သည့်စုစုပေါင်းငါးတွဲကိုကြည့်လိမ့်မည်။ 76898 ဖော်မြူလာအီး Panasonic Jaguar ပြိုင်ကား GEN2 ကားနှင့် Jaguar I-PACE eTROPHY နှင့် 76899 Lamborghini Urus ST-X နှင့် Lamborghini Huracánစူပါ Trofeo EVO.
အပြင်အဆင်သည်အထူးသီးသန့် p ဖြစ်သည်artကားထုတ်လုပ်သူများနှင့်စုဆောင်းသူများနှင့်အတူလက်တွဲလုပ်ဆောင်ပါ Speed Champions တစ်ခုတည်းသောအငြိမ်းစားကိုလက်လွတ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူး Lego ယခုအချိန်ထိ Nissan မော်ဒယ်၊ 76896 Nissan က GT-R ကို NISMO.
mouse of the house သည်နာမည်ကျော်ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်လာသည် Lego ဇာတ်ကောင်မျိုးစုံနှင့် franchise အားလုံးသည်အောက်၌ကျသည် Disney နဖူးစည်း သင်ကားများကိုနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ Raya နှင့်နောက်ဆုံးနဂါးကဲ့သို့အသစ်သောထုတ်ဝေမှုများသို့မဟုတ်ခေတ်သစ် classicFrozen လိုပါပဲ၊ အရသာတိုင်းအတွက်လိုက်ဖက်တဲ့အငြိမ်းစားအစုံရှိတယ်။
အပန်းဖြေဥယျာဉ်ပရိသတ်များသည်ပင်လျှင်သူတို့ကိုဆွဲဆောင်ရန်အရာရှိသည် 71044 Disney ရထားနှင့်ဘူတာမူရင်းကိုအခြေခံသည် Disneyland icon ကိုဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးထွက်ခွာပါ။
10873 Minnie ၏မွေးနေ့ Party
၁၀၉၂၂ Ariel's Undersea Castle
၁၀၉၂၄ Lightning McQueen's Race Day
41167 Arendelle Castle ကျေးရွာ
43176 Ariel ရဲ့ပုံပြင်စာအုပ် Adventures
43177 Belle ရဲ့ပုံပြင်စာအုပ် Adventures
43188 Aurora ရဲ့သစ်တောအိမ်တွင်း
71044 Disney ရထားနှင့်ဘူတာ
ဘဝကငါးယောက်အတွက်နည်းလမ်းရှာတာမဟုတ်ဘူး Jurassic World သူတို့၏နေ့ရက်များအဖြစ်သတ်မှတ်သည် Lego ရရှိနိုင်သောအစုံများအုပ်စု၏စာရင်းသည်နံပါတ်ဖြစ်ပုံရသည်။ Lego Jurassic World စိတ်ကူးယဉ်ပန်းခြံ၏သမိုင်းမတင်မီမျိုးစိတ်များအတွက်အထူးပြုအပိုင်းအစများတည်ရှိပြီးယင်းအုတ်များသည်စျေးကွက်တွင်တန်ဖိုးရှိသည်။
အငြိမ်းစားမော်ဒယ်တွေထဲမှာလည်းပါပါတယ် 75941 Ankylosaurus vs. Indominus Rexရှားပါး Indominous Rex နှင့်အထူးသီးသန့်နှစ်ခုလုံးကို၎င်း၊ ၎င်းတို့၏ပထမဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အန်ကီလိုဆောရပ်စ်မရ။ ၎င်းကိုပြည့်စုံသော gyrosphere ဘူတာသို့ထည့်ပါ၊ ၎င်းသည်မကောင်းသော st မဟုတ်ပါart minifigure အတိုင်းအတာအတိုင်း Jurassic World.
75939 Dr. Wu's Lab: ကလေးဒိုင်နိုဆောများခွဲထွက်ခြင်း
75940 Gallimimus နှင့် Pteranodon Breakout
75941 Ankylosaurus vs. Indominus Rex
၇၅၉၄၂ Velociraptor: Biplane ကယ်ဆယ်ရေးမစ်ရှင်
75936 Jurassic ပန်းခြံ: T. rex သောင်းကျန်း
Part ဒဏ္ာရီထဲက Monkie Kid ဆောင်ပုဒ်၏ပထမ ဦး ဆုံးသောမော်ဒယ်များစွာသည်ယခုနှစ်အကုန်တွင်အငြိမ်းစားယူရတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်အသစ်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုသည်ပြီးခဲ့သည့်လတွင်အမျိုးအစားထဲသို့ပင် ၀ င်လာသည်။
အနားယူဖို့မသိသေးတဲ့ကိုးကန့်ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ Monkie Kid အစုံသည် 80018 Monkie KidCloud Bikeအတော်လေးမကြာသေးဘူး Monkie Kid သီးသန့် minifigures များ၊ ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးနှင့်ရှားပါးသော cloud အပိုင်းများပါ ၀ င်သည်။
80015 Monkie Kid'' s ကို မိုးတိမ် Roadster
အငြိမ်းစားယူရန်သာရှိသေးသည် Stranger Things ပုံစံကို Netflix p အောက်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်artnership ။ အနည်းစုရှိတယ် Lego ပုံစံကိုမှန်သားပြင်နှင့်ဇောက်ထိုးပြထားသည်ကိုမြင်သောဤကဲ့သို့ဖန်တီးမှုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
အမြဲစိမ်းပင် Lego CITY အပြင်အဆင်အသစ်များကဲ့သို့မကြာမီထုတ်ကုန်များပိုမိုရရှိလာစေရန်အပြင်အဆင်ကိုစင်ပေါ်တင်ရန်နေရာလိုအပ်သည် Stuntz အကြောင်းအရာမရ။ ထိုင်ပြီးတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထိုင်ပြီးအငြိမ်းစားယူခြင်းအစုံအလင်ကဲ့သို့သောထူးခြားသောပူဇော်သက္ကာများအပါအ ၀ င်ကြီးကြီးမားမားစာရင်းတစ်ခုအတွက်ပြင်ဆင်ပါ 60258 ညှိအလုပ်ရုံ.
60216 Downtown မီးသတ်တပ်ဖွဲ့
60228 Deep Space Rocket နှင့်လွှတ်တင်ထိန်းချုပ်မှု
60229 ဒုံးပျံညီလာခံ & သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
60245 ရဲတပ်ဖွဲ့ Monster Truck ကား Heist
60254 လူမျိုးလှေ Transporter
60260 Air ကိုလူမျိုး
60263 သမုဒ္ဒရာ Mini ကိုရေငုပ်သင်္ဘော
60267 Safari Off-Roader ဖြစ်သည်
60270 ရဲအုတ် Box ကို
60272 Elite ရဲလှေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
60273 Elite ရဲတပ်ဖွဲ့ Driller Chase
60274 Elite ရဲတပ်ဖွဲ့မီးပြတိုက် Capture
Lego VIDIYO ပယ်ဖျက်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်သူကပုံရသည် Lego Group သည်ဂီတပုံစံအများစုကိုအနားယူရန်အစီအစဉ်မရှိသေးပါ ၄၃၁၀၈ Bandmates နှစ်ကုန်တွင်မရရှိနိုင်စေရန်စီစဉ်ထားသည်။ BeatBox အခင်းအကျင်းအစအဆုံးကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်အတွက်ဆက်လက်ထုတ်လုပ်သွားမည်ဟုထင်ရသည်။
အသက်ကြီးသူလေး ဦး Lego Art လက်ရှိတွင် ၂၀၂၁ တွင်အငြိမ်းစားယူရန်ပြင်ဆင်နေသည်၊ display ဗဟိုပြုမော်ဒယ်များ၏ပထမလှိုင်းလုံးသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်မျက်နှာစာများကျန်ရစ်သည်။ ၎င်းတွင်လိုင်စင်ရပါဝင်သည် artကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ပါတယ် 31200 Star Wars သူမ နှင့်အထင်ကရတည်ဆောက်မှုများ 31197 အန်ဒီ Warhol ရဲ့မာရီလင်မွန်ရိုး.
31197 အန်ဒီ Warhol ရဲ့မာရီလင်မွန်ရိုး
The Beatles ၃၁၁၉၈
Heartအင်းအိုင် City စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးသမျှအမျိုးစုံလင်ဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်၊ စျေးဝယ်ကုန်တိုက်မှသည်အရာအားလုံးနှင့်တစ်နေရာတည်းသို့ထုပ်ပိုးထားသောကွဲပြားသည့်ရာသီဥတုအပူပိုင်းတောအုပ်တစ်ခုအထိဖြစ်နိုင်သည်။
Lego Friends နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အဟောင်းတွေတည်ဆောက်မှုတွေအများကြီးကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးအငြိမ်းစားယူဖို့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့နံပါတ်တစ်ခုကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်လိမ့်မယ်။ အောက်ပါစာရင်းအပြည့်အစုံကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
41390 Andrea ရဲ့ကား & အဆင့်
41391 သူartအင်းအိုင် City ဆံသဆိုင်
41392 သဘာဝ Glamping
41394 သူartအင်းအိုင် City ဆေးရုံ
41431 သူartအင်းအိုင် City အုတ် Box ကို
Lego BrickHeadz ယခင်ကကဲ့သို့အတွဲများစွာကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းမပြုနိုင်သော်လည်းဆောင်ပုဒ်သည်လိမ္မာပါးနပ်သောနည်းလမ်းကိုဆက်လက်သက်သေပြနေဆဲဖြစ်သည် Lego ဒီဇိုင်နာများသည်စျေးသက်သက်သာသာနှင့်အထင်ကရအစုံများဖြင့်သူတို့၏ဖန်တီးမှုကြွက်သားများကိုအားဖြည့်ရန်
အမှတ်တံဆိပ်အသစ်အပါအ ၀ င်ဒီနှစ်ကုန်မှာဆယ့်ခြောက်စုံကစင်ပေါ်ကထွက်ခွာပါလိမ့်မယ် 40492, La Catrina မက္ကဆီကို၏သေနေ့အားလပ်ရက်အတွက်အထူးအစီအစဉ်အဖြစ်ပထမအစု အကန့်အသတ်တွေတောင်ရှိတယ် Ninjago နှစ်ပတ်လည်မော်ဒယ် - 40490 NINJAGO ၁၀ - ပွဲ ဦး ထွက်ပြီးခါနီးမှအနားယူတော့မယ်။
40436 Lucky ကြောင်
40490 NINJAGO ၁၀
40492, La Catrina
မင်းရဲ့ကမ္ဘာကြီးကို DOT လုပ်ဖို့အချိန်သိပ်မကျန်တော့ဘူး၊ အနည်းဆုံးဒီအငြိမ်းစားတွေနဲ့မနေနဲ့ Lego DOTS ပရိယာယ်သေတ္တာများကဲ့သို့ပုံစံများသည်အကြောင်းအရာအတွက်နောက်လာမယ့်အရာများအတွက်နည်းလမ်းဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်မတိုင်မီအငြိမ်းစားယူခြင်းသည်ပိုသေးငယ်သောအိတ် tag အစုံများနှင့်အရောင်အသွေးစုံကြွပ်ကြွပ်အိတ်တစ်ခုစီ၏စီးရီးများအပါအ ၀ င်အကြောင်းအရာတစ်ခုစီ၏ဒီဇိုင်းများ၊
41913 လက်ကောက် Mega Pack ကို
41914 Creative ရုပ်ပုံများ
41915 လက်ဝတ်ရတနာ Box ကို
41921 E ကိုxtra DOTS - စီးရီး ၁
41922 Cool Cactus လက်ကောက်
41927 Bag Tag ခွေး
41931 E ကိုxtra DOTS - စီးရီး ၁
41939 Bag Tag နဂါး
41940 အိတ်တံဆိပ် Unicorn
Lego Minecraft ၎င်းသည်ယခင်အခင်းအကျင်းမှနောက်ဆုံးထွက်ရှိမှုရှစ်ခုကိုကြည့်ရှုရန်ရှိသည်၊ ၎င်းကို အခြေခံ၍ ပထမဆုံးပုံစံအပါအ ၀ င် Minecraft Dungeons spin-off ခေါင်းစဉ်
21163 အဆိုပါ Redstone တိုက်ပွဲ ဂိမ်းပေါ်မူတည်ပြီးထူးခြားသော blocky လက်နက်များနှင့်ဇာတ်ကောင်များစွာပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းကိုလုံးဝအစားထိုးလိမ့်မည် 21176 အဆိုပါတောတွင်းစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောမရ။ မင်း Redstone Golems နှစ်ခုကိုမင်းမျက်စိဖူးရင်မြန်မြန်လုပ်ပါ။
21152 The Pirate သင်္ဘောစွန့်စားမှု
21154 အဆိုပါ Blaze တံတား
21155 အဆိုပါ Creeper မိုင်း
21159 အဆိုပါ Pillager တပ်စခန်း
21162 အဆိုပါ Taiga စွန့်စားမှု
21163 အဆိုပါ Redstone တိုက်ပွဲ
ဤလသည်မပြောင်းလဲပါ Lego Minions၎င်းသည်သက်ဆိုင်ရာတစ်ခုမတိုင်မီအနားယူရန်တစ်အုပ်တည်းသာတွေ့နေရသည် Minions: The Rise of Gru ရုပ်ရှင်သည်ရုပ်ရှင်ရုံများသို့တိုက်ရိုက်လွှင့်ရန်အခွင့်အရေးတောင်ရှိသည်။
စဉ် 75549 မတားဆီးနိုင်သောစက်ဘီး Chase ပထမဆုံးပြဇာတ်ဖြစ်နိုင်သည် Lego ပါ ၀ င်သောရုပ်ရှင်ရုံများမတိုင်မီအနားယူရန်သတ်မှတ်သည် Lego Minions အုပ်စုများသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်နှစ်ကုန်အထိဆက်လက်ရှိနေလိမ့်မည် Minions: The Rise of Gru သည်နောက်ဆုံးတွင်ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ပွဲ ဦး ထွက်လိမ့်မည်။
75549 မတားဆီးနိုင်သောစက်ဘီး Chase
← LEGO Gaming ဆောင်ပုဒ်သစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရန်လိုအပ်သောဗီဒီယိုဂိမ်းခြောက်ခု
LEGO Seasonal 40499 Santa's Sleigh စျေးနှင့်ဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည် →
တစ်ခုမှာ "LEGO တိုင်းသည် ၂၀၂၁ တွင်အငြိမ်းစားယူသည်"
ဒါကိုဖတ်နေတာ artlego အစုံအများကြီးနဲ့ Avid lego fan တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့ ၆ နှစ်အရွယ်ကိုပြောပါ။ Bowsers ကြီးတွေသူဌေးရဲတိုက်၊ ကွမ်ဂျက်၊ Avengers ရဲတိုက်နှင့်အချို့ marvel အငြိမ်းစားယူနေသော mech bot များကအငြိမ်းစားယူခြင်းကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေနှင့်ပြောသည်။ "ဘာကြောင့်သူတို့ကိုသိုလှောင်ခန်းမှာမထားတာလဲ၊ lego အသစ်တွေကုန်သွားရင်အဟောင်းတွေကိုပြန်ယူပါ"